Shiinaha warshaddii Hilibka doofaarka la qaboojiyey ee la kariyey | Huikang
Soo bandhigida alaabta Qalabka ceyriinka wuxuu ka yimaadaa kawaanada xoolaha iyo shirkadaha diiwaan gelinta dhoofinta ee Shiinaha. Alaabta ceyriinka ah ee laga soo dhoofiyo badanaa France, Spain, Netherlands
faahfaahinta Jeex iyo laadh, xidho xadhig
Astaamaha Qiyaasta dufanka iyo khafiifka waa 3: 7, dufan laakiin ma ahan dufan.
Habka Qaboojinta oo duuban
Habka qaboojinta ee lagu duubay filimka, habka CPF wuxuu leeyahay faa iidooyin badan: filimka la sameeyay markii cuntada la qaboojiyay wuxuu hor istaagi karaa ballaarinta iyo jiritaanka cuntada; xaddid heerka qaboojinta, kristantarrada barafka ee la sameeyay way fiican yihiin, mana soo saari doonaan kiristaalo waaweyn oo baraf ah; ka hortag dhaawaca unugyada, badeecada si dabiici ah ayaa loo dhalaalin karaa; Dareenka cunnada ayaa dhadhamiya isaga oo aan gaboobin.
Teknolojiyada barafowga Ultrasonic
Habka qaboojinta filimka-duuban, UFT waxay isticmaashaa hirarka ultrasonic si loo hagaajiyo habka qaboojinta cuntada. Faa'iidada ayaa ah in ultrasound uu xoojin karo wareejinta kuleylka inta lagu jiro qaboojinta, kor u qaadista barafka inta lagu jiro qaboojinta cuntada, iyo hagaajinta tayada cuntooyinka la qaboojiyey. Saamaynta kaladuwan ee ay keento ultrasound waxay ka dhigi kartaa lakabka xadka khafiif ah, kordhinta aagga xiriirka, iyo daciifinta caabbinta kuleylka u wareejinta, taas oo faa'iido u leh kordhinta heerka wareejinta kuleylka. Cilmi baaris ku saabsan xoojinta habka wareejinta kuleylka ayaa muujineysa in ultrasound-ka uu kor u qaadi karo abuurka iyo ka-hortagga kobcinta barafka Crystal.
Tiknoolajiyada qaboojinta cadaadiska-sare
Keydinta Cadaadiska Sare. HPF waxay isticmaashaa isbeddelada cadaadiska si loo xakameeyo dabeecadda isbeddelka dabeecadda biyaha ee cuntada. Xaaladaha cadaadiska sare (200 ~ 400MPa), cuntada waxaa lagu qaboojiyaa heerkul gaar ah. Waqtigaan, biyuhu ma barafoobayaan, ka dibna dhaqso Cadaadiska waa laga qafiifinayaa, oo kiristaalo yar yar oo isku mid ah ayaa laga sameeyaa cuntada dhexdeeda, mugga kristantarradeena barafku ma sii fidayo, taas oo yareyn karta dhaawaca gudaha ee cuntada. nudaha iyo helitaanka cuntada barafaysan ee hanan karta tayada cuntada asalka ah.
Hore: Ulaha Hilibka Doofaarka la qaboojiyey
Xiga: Carrabka Hilibka lo'da ee la kariyey
Hilib doofaar barafaysan